जीवनभर निरोगी रहन यसो गर्नुहोस् – साइन्स इन्फोटेक
आयुर्वेद जीवनशैली हेल्थ टिप्स
अगस्ट 22, 2019 सेप्टेम्बर 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments जीवन, निरोगी
भनिन्छ, निरोगी जीवन विताउन पाउनु आफैमा एक सौभाग्य हो । तर, यसका लागि कामना गरेर मात्र पुग्दैन । आफ्नै जीवनशैलीलाई सन्तुलित बनाउन सक्नुपर्छ । स्वस्थ रहनका लागि ठूलै काम गर्नु पर्दैन । दैनिक जीवनमा गरिने स-साना कार्यमा विशेष ध्यान दिएर पनि स्वस्थ एवं निरोगी हुन सकिन्छ । गौतम बुद्धको भनाईको सार छ, ‘जीवनभर निरोगी रहनु आफैमा उपहार हो । सकेसम्म हामी लामो आयु नै बाँच्न खोज्छौं र बाँचुञ्जेल निरोगी रहन चाहन्छौं । तर, कसरी निरोगी जीवन बाँच्ने ? कसरी लामो आयु बाँच्ने ? हामीले स्वस्थ्य, सन्तुलित र अनुशासित दिनचर्या अपनाएर लामो आयु पाउन सक्छौं । जीवनभर निरोगी रहन सक्छौं ।
जीवनभर निरोगी रहने उपायहरु
वेल्समा गरिएको एक अध्ययन अनुसार महिनामा हप्तामा दुईपटक भन्दा धेरै सेक्स गर्ने मानिस भन्दा महिनामा एक पटक भन्दा कम सेक्स गर्ने मानिसको छिटो मृत्यु हुने जोखिम बढी हुन्छ । स्वस्थ सेक्स लाइफ भएका जोडीहरुलाई सात वर्ष कम उमेरको देख्न सकिन्छ ’cause सेक्सले तनावमुक्त बनाउँछ र निन्द्रा राम्रो हुन्छ ।
ओखर सबैभन्दा स्वस्थ बदाम हो ’cause त्यसमा रोग प्रतिरोधी र बुढ्यौली नलाग्ने एन्टी अक्सिडेन्टहरु पाइन्छ । दैनिक तीन ओखर खाएमा तपाईलाई धेरै फाइदा गर्छ ।
एक अध्ययनका अनुसार अनिन्द्राको कारणले तपाईलाई डिप्रेशन र मुटुको रोग जस्ता स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढाउँछ । र, सानो परिवर्तनले यसमा धेरै फरक पार्छ । हावार्ड बिजनेस स्कूलले गरेको अध्ययन अनुसार सात घन्टा वा त्यसभन्दा कमी सुत्ने मानिसमा ब्लडप्रेसरको समस्या हुने पाइएको छ जसले हर्टअट्याक र स्ट्रोकको समस्या हुन सक्छ ।
११. घरपालुवा जनावर राख्नुहोस् विशेषगरी कुकुर
नियमित रुपमा गीत गुन्गुनाउनु पनि स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हुने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । गीत गुन्गुनाउने बानीले मानिसको आयु बढ्न सक्छ ’cause गित गुन्गुनाउँदा तनाव कम हुन्छ । यसले मुटु स्वस्थ रहन पनि मद्धत गर्छ र डिप्रेसनको समस्या हुँदैन ।
आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य इतिहास पत्ता लगाउनुभयो भने तपाईले आफ्नो स्वास्थ्यको भविष्य पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र ’cause धेरै जसो अवस्थामा रोगको वंशाणुगत सम्बन्ध हुन सक्छ ।
वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएअनुसार तपाईले तौल जोख्नेभन्दा पनि आफ्नो कम्मरको नाप लिनुभयो भने स्वास्थको स्थिती थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । ’cause यसले शरीरको महत्वपूर्ण अंगको वरिपरि जम्मा भएको बोसो पत्ता लगाउँछ । पुरुषको कम्मर ९४ सेन्टी मिटर र महिला कम्मर ८० सेन्टिमिटर भन्दा कम हुनुपर्छ ।
← केटाका यी ७ कुराहरु हरेक केटीलाई मन पर्छ
मानव स्वास्थ्यको लागि नरिवल खानुका फाइदाहरू →
डिसेम्बर 25, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0